टेक्नोलोजी Archives - Page 12 of 12 - Nepali Virals
ge.tt बाट गरौं फाइल सेयर
११ भाद्र २०६९, सोमबार १९:३४	275
सिनेमा, संगीत, तस्विर तथा अन्य कुनै पनि खालका डकुमेन्ट फाइलहरु अनलाइन मार्फ साथिभाईलाई बाँढ्न चाहनुहुन्छ भने सबै भन्दा सजिलो वेबसाइट हो ge.tt। जसमा विदेशमा अध्ययनका लागि गएका साथीका लागि पारिवारिक भिडियो देखी आफूले हेरेका चलचित्र सजिलै बाँढ्न सकिन्छ। हुन त यस खालको फाइल साझा गर्ने निशुल्क सेवा दिने धेरै साइटहरु धेरै छन्। तर ती सबै भन्दा फरक यसको विशेषता भनेको यसबाट फाइल साझा गर्नका लागि यसमा रजिस्टर हुनु जरुरी छैन। साथै फाइल कत्रो आकारको छ भन्नेले पनि कुनै फरक पार्दैन।
विद्यार्थीका लागी उपयोगी ९ वेबसाइट
६ भाद्र २०६९, बुधबार १४:२६	384
इन्टरनेट, सूचनाको द्रूत राजमार्ग मात्र होइन हाम्रो ज्ञानको महत्वपूर्ण माध्यम हो यो। संसार यसले समेटेको छ अनि विश्व नै यसमा समेटिएको छ। अहिले त हरेक कुरा इन्टरनेटमा छ, कोर्सका कुरा अनि होमवर्कका कुरा सबै खोजे पाइहालिन्छ। इन्टरनेटका बारेमा धेरैले भन्ने कुरा हुन् यी। तर इन्टरनेट जोडेका कम्प्युटर चलाउन बसेका धेरैलाई पर्ने समस्या चाहिँ यो हो कि ती ज्ञान र सूचनामा आफूलाइ चाहिने कुरा पाउन कहाँबाट सुरु गर्ने। अनि ति सामग्रीको विश्वसनियता के होला सबैको मनमा उठ्ने जिज्ञासा हो यो। तर अध्ययनका लागि खाली गुगलीनु मात्र पर्याप्त छैन। गुगल खोजीले व्यापक नतिजा देखाउँछ जुन शब्दको मेल खाएका पेजहरुको लामो सूचि मात्र हो। क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयको जिवनमा इन्टरनेट अध्ययनका क्रममा समय र अर्थ दुवैको बचतको माध्यम हो। जागिर गर्दै अध्ययन गरिरहेका हरुको लागि पुस्तक किन्ने खर्च देखी कम समयमा अध्ययन सक्नुपर्ने दबाबलाई सामना गर्ने हतियार पनि हो इन्टरनेटमा उपलब्ध पेजहरु। आउनुहोस् त्यस्ता नौ पेज के के हुन् हेरौं।
यहाँबाट राखौं फेसबुकमा कभर फोटो
३ भाद्र २०६९, आईतवार ११:५६	356
फेसबुक चलाउने नेपालीको सँख्या १६ लाख ८० हजार भन्दा माथि पुगिसकेको छ। यो सँख्या बढ्ने क्रममा छ। फेसबुक चलाउने नेपालीको सँख्यामा बढोत्तरीसँगै फेसबुकमा नेपालीहरुले पनि एप्लिकेसन बनाउन थालेका छन्। त्यसो त नेपाली उत्पादन तथा सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको विज्ञापन पनि फेसबुकका पेजमा देखिन थालेका छन्। फेसबुकमा आफ्नो पेज लाइक हुनुलाई गौरब र सम्मानको रुपमा हेर्न थालिएको छ। हरेक प्रयोगकर्ता फेसबुकमा आफ्नो पेज आकर्ष होस् भन्ने चाहन्छन्। आफ्नो स्टाटसमा आउने कमेन्टको लर्को नै स्टाटस सिम्बोलका रुपमा लिन थालेको अवस्थामा फेसबुकको टाइलाईनलाई आकर्षक बनाउन राम्रो तस्विर खोजेर कभर फोटो राख्नेहरु धेरै छन्। फेसबुकमा उपस्थितीलाई आकर्षक र अरुको भन्दा फरक देखाउनु आवश्यकता महसुस गर्ने फेसबुक प्रयोगकर्ताका लागि टाइमलाइनमा राख्ने कभर फोटोको संग्रह पनि तयार भएको छ। जसमा समसामयिक विचार तथा पर्वलाई समेटेर टाइमलाइन फोटोहरु तयार पारिएका छन्।
डबल क्लिक गर्दा ड्राइभ खुल्दैन? यो तरिका अपनाउनुस्
२७ श्रावण २०६९, शनिबार ०६:३१	325
कम्प्युटर डेक्सटप तथा ल्यापटप दुवैमा डबल क्लिक गर्दा ड्राइभ (C, D or E) खुल्दैन? ओपनवीथ (Open With) भनेर विभिन्न सफ्टवेयरको अप्सन दिन्छ। यस्तो खालको समस्या धेरै जसो विन्डोज एक्सपी (Windos XP) चलाउनेले भोगिरहेको समस्या हो। वास्तवमा यस्तो हुनुको कारण कम्प्युटरमा भाइरस छिरेर हो। जसले कम्प्युटरका सबै ड्राइभमा अटोरनडटआइएनएफ (autorun.inf) नामको हिडन फाइल बनाइ दिएको हुन्छ। जसले गर्दा कम्प्युटरको सी, डी वा इ कुनै पनि ड्राइभ डबल क्लिक गर्दा खुल्दैन। बरु त्यसको सट्टामा ती ड्राइभलाई खोल्न तथा हेर्नका लागि विभिन्न सफ्टवेयर (कम्प्युटरमा स्थापित, ईन्स्टल भएका) छनौट गर्नका लागि दिन्छ। यदी कम्प्युटरमा यस्तो समस्या भोग्नु भएको छ भने यसो गर्नुस:
२३ श्रावण २०६९, मंगलवार १४:१२	433
हाम्रो जिवनको अहम हिस्सा बनिसकेको छ कम्पयुटर। वास्तवमा यो एउटा मेसिन मात्र हो हुन चाहिँ। यसको माध्यमबाट हामीले धेरै कामहरु ग्रिरहेका हुन्छौं। अध्ययन र सिक्ने मामलामा पनि कम्प्युटर हाम्रो भरपर्दो मित्र नै हो। तर पनि यसबाट सिक्नुपर्ने कुराहरु पनि धेरै छन् जसले हामीलाई हाम्रो कम्प्युटर जस्तै चुस्त तन्दुरुस्त राख्छ। याद गर्नुस् कम्प्युटर चलाउँदा त्यसको द्रूत गति र लामो समय सम्मको ब्याट्री प्रयोगका लागि अपनाइने प्रक्रियाहरु। तीनै प्रक्रिया मानिसको जिवनमा पनि आवश्यक छ यदी द्रूत, चुस्त र तन्दुरुस्त हुने हो भने। जसबाट आर्थिक तथा मानसिक धेरै खालका लाभ पनि छन्। जुन कम्प्युटरबाट सिक्नु आवश्यक छ।
डाउनलोड लण्डन ओलम्पिक एप्स
१२ श्रावण २०६९, शुक्रबार १२:४९	285
विश्वभरका खेलप्रेमीको ध्यान यतिखेर लण्डनमा भएको बेला तपाइँ पनि आफ्नो फोनबाट लण्डन ओलम्पिकसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि आफ्नो स्मार्ट फोनमा डाउनलोड गर्नुहोस् ओलम्पिकको अफिसियल एप्स ज्वाइन इन। एन्ड्रोइड, ब्ल्याकबेरी र आइफोनका लागि तयार पारिएको एप्स ज्वाइन इनमा हरेक देश, खेल, खेलाडी र समय तालिकाका बारेमा जानकारी राखिएको छ।
यसरी गर्ने हो टच स्क्रिनको सफाइ
४ श्रावण २०६९, बिहीबार १५:०२	293
टच स्क्रिनमोबाइल अथवा ट्याबको प्रयोग गर्नुहुन्छ भने स्क्रिनको सफाइमा विशेष ध्यान दिनुहोला। नत्र भने स्क्रिनमा छोएर त्यसका कामहरु ठीकसँग लिन सकिन्न।
यसरी बढ्छ ब्याकअप
१ श्रावण २०६९, सोमबार २०:३६	291
कम्प्युटर बिना काम नै नचल्ने अवस्थामा आफ्नो ल्यापटपको ब्याकअपलाई केही लामो समय सम्म बढाउनु छ भने केही कुरामा ध्यान दिनुपर्छ।
यसो गरौं पानी परे
१ श्रावण २०६९, सोमबार १७:५३	458
मोबाइल, कम्प्युटर, ट्याब्लेट, आइप्याड जस्ता धेरै उपकरणबाट हाम्रो दैनिकी घेरिएको छ। पेय पदार्थ तथा पानी कम्प्युटर तथा ल्यापटपको किबोर्डमा परिहाल्यो भने चाहिँ यस खालका सावधानी अपनाउनु उत्तम हुन्छ।